Dalkaan.com -Wararka Ugu Danbeeyey » Madaxweyne Waare oo kulan la qaatay Saraakiishii Baladweyne gaartay (Aqriso)
Madaxweyne Waare oo kulan la qaatay Saraakiishii Baladweyne gaartay (Aqriso)
Maxamed Cabdi Waare Madaxweynaha Maamulka Hir-Shabeelle ayaa Xafiiskiisa Baladweyn xalay Kulan Xasaasi ah kula qaatey Saraakiisha Qaybta 21aad iyo Kuwa Danab ee xalay gaaray Magalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Kulanka ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay sidii Maamulka HIR-Shabeelle iyo taliska qeybta 21aad ay isaga kaashan lahaayeen Sgida dhinaca Amniga iyo howlgallada ka dhan ah ah Ururka Al-Shabaab oo ku sugan deegaano ka tirsan Hiiraan iyo Gobolka Galgaduud.
Taliyaha Qaybta 21aad General C/Casiis Cabdullaahi (Qooje) ayaa madaxweynaha Warbixin ka siiyay u jeedka safarka iyo Howlaha Ciidamadu ka wadaan Gobolada Dhexe Gaar ahaan Deegaanada Maamulka Galmudug.
Taliye Qooje oo kulanka faah faahin ka bixinayay ayaa waxaa uu sheegay inay ka wada hadleen sidii Taliska qeybta 21aad uu Maamulka Hir-Shabelele gacan uga siin lahaa xoreynta deegaannada u dhaxeysa Gobolada Hiiraan & Galgaduud oo ay ku sugan yihiin Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Saacadaha soo socda ay la kulmi doonaan Saraakiisha Ciidamada xoogga dalka ee Gobolka Hiiraan si ay uga wadatashadaan sida ugu fudud ee loo qaadi karo howlgal ka dhan ah Al-Shabaab.
Madaxweynaha Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ugu dambeyn ku booriyay Howlaha Ciidanka Xoogga dalka ka wadaan Gobolada Hiiraan & Galgaduud, isaga oo ku bogaadiyay Juhdiga Dowladu ku Bixinayso in ay wada Shaqeeyaan Qaybaha 27aad iyo 21aad ee Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
Previous articleKheeyre maxuu ka dalbaday Wakiilada Beesha Caalamka?
Next articleDilal kala duwan oo Muqdisho ka dhacay (Faahfaahin)